प्रविधि - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » प्रविधि
काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा भित्रिएको सूचनाप्रविधिको तीव्र विकाससँगै दूरसञ्चार उपकरण आयात र पूर्वाधार विकास विस्तारमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दूरसञ्चार उपकरण [...]
काठमाडौं, २ साउन । सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तारलाई तीव्रता दिएसँगै स्थानीय सरकार सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारले स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका हुन् । [...]
फोरजीमा ग्राहक तान्न टेलिकम र एनसेलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा, कसका प्रयोगकर्ता कति पुगे ?
जनकपुरधाम । पछिल्लो समय नेपाली मोबाइल सेवाप्रदायकबीच फोरजी ग्राहक बढाउनेमा चर्को प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । देशव्यापी रुपमा नेटवर्क विस्तारसँगै आकर्षक प्याकेजमार्फत कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आफूतिर लोभ्याउन थालेका छन् । यसैबीच [...]
प्रदेश १ र २ मा पनि चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
जनकपुरधाम । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गरेको छ । बुलेटिनमा स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभावले आज मुलुकभर मेघगर्जन÷चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । हाल [...]
तीन दिनसम्म कस्तो रहला मौसम ?
जनकपुर, २१ माघ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापिय रेखाको आंशिक प्रभाव रहेको पूर्वानुमान जारी गरेको छ । यसको प्रभावले देशका पहाडी भू–भागमा आशिंक बदली रहेको छ [...]
सप्तरीमा कम्प्युटर एसोसिएसनको समिति गठन
राजविराज, १२ माघ । सप्तरी जिल्लामा क्रियाशिल सूचना, प्रविधीको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको एक भेलाले कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालमहासंघको तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । ईन्फोल्याण्ड कम्प्युटर अफ आइटीका प्रोप्राइटर राजाराम प्रसाद [...]
याहुका वेबसाइट र सबै कन्टेन्ट हट्ने
जनकपुरधाम। याहुले आफ्ना सबै वेबसाइट बन्द गर्ने भएको छ । भेरिजोनको इनग्याजेटले दिएको जानकारी अनुसार याहुका वेबसाइट र सबै कन्टेन्ट हट्ने भएका हुन् । याहु भेरिजोनको स्वामित्वमा रहेको थियो । [...]
घर बसेरै करका यी कामहरु गर्न सकिन्छ
राजविराज, २९ असोज । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रक्रियाका धेरै जसो कामलाई अनलाइनबाटै लिनसकिने गरी व्यापक सुधार थालनी गरेको छ । विगतमा करदाता सेवा कार्यालयमा सामान्य कामका लागि पनि लामो [...]
बाढी पूर्वानुमानः अति उच्च सतर्कता अपनाउनुहोस्!
२०७७ असोज ६ जनकपुरधाम । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज (मंगलबार) राति बाट अगामी ११ गतेसम्म देशका सबै नदीहरुमा बहाव बढ्ने भएकाले सो अवधिसम्म नदी किनार क्षेत्रमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न [...]
चन्द्रशम्शेरले बनाएको ऐतिहासिक चन्द्रनहरः यस्तो छ इतिहास
श्यामसुन्दर यादव सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्वर १ (साबिक गाउँ विकास समिति फत्तेपुर)मा रहेको छ देशकै सबभन्दा पुरानो नहर । ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय सम्भावना बोकेको चन्द्रनहर प्रणाली वि.सं. १९८० [...]